बजेटको इतिहास : यस्तो थियो पहिलो बजेट « Arthabazar.com
बजेटको इतिहास : यस्तो थियो पहिलो बजेट
प्रकाशित मिति : १५ जेष्ठ २०७८, शनिबार ०७:००
काठमाडाैं । नेपालमा वि.सं. २००८ सालदेखि औपचारिकरुपमा बजेट घोषणा सुरु भएको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सूवर्ण शमशेरले संसदसमक्ष ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । जसमा राजस्व ३ करोड ६ लाख १९ हजार रुपैयाँ राखिएको थियो ।
नेपालको पहिलो बजेट नेपाली कांग्रेसका नेता मातृकाप्रसाद कोइराला सरकारले ल्याएको थियो । त्यसअघिका सरकारका बजेट पारिवारिक हुन्थे । जनता लक्षित कार्यक्रम हुँदैनथे । जनतालाई जवाफ पनि दिनुपर्दैनथ्यो । ००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि बजेट संसदसमक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रणालीको विकास भएको हो । १ सय ४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनको शोषणमा रहेका जनताले यो बजेटले पहिलोपटक आर्थिक स्वतन्त्रताको अधिकारको महशुस गरायो ।
बहुदल पछिको बजेट
२०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । त्यसपछि बनेको सरकारले ल्याएको बजेट भने केही जनमुखी देखिए । तर, कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भने त्यति उपलब्धीमूलक देखिएनन् । बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापनापछि गठन भएको अन्तरिम सरकारकाअर्थमन्त्री देवेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक सामाजिक सूचक र विश्व आर्थिक सन्तुलनलाई हेरेर १९ अर्व ७९ करोड बरावरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । त्यतिबेला कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो ।
०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले ल्याएको बजेटको आकार ३६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको थियो । जसमा १६ अर्ब ८९ करोड विकासका लागि छुट्याइएको थियो । त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला देशको प्रधानमन्त्री थिए । नेपालको बजेट इतिहासलाई केलाएर हेर्ने हो भने बजेटले ०६१–०६२ सालमा पहिलोपटक १ खर्ब रुपैयाँ नाघेको थियो । त्यतिबेला डा रामशरण महत अर्थमन्त्री थिए । आब ०७२–०७३ मा बजेट रकम ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । आब ०७१–०७२ मा ६ खर्ब १७ अर्बको बजेट सार्बजनिक भएको थियो । ती दुबै बजेट अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलेनै ल्याएका थिए ।
आर्थिक वर्ष ०७३।७४ को बजेट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरे । उनले साढे १० खर्बको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । यो बर्ष एक घर एक रोजगारी, किसानलाई पेन्सन, पुनर्निर्माणमा लगायत सबै क्षेत्रमा आवश्यक बजेट छुट्याइएको थियो ।
कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ छ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख २९ हजार अर्थात् ५८.९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ अर्थात् २९.७ प्रतिशत छ । त्यस्तै, वृद्ध भत्तामा वृद्धि, हरेक जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा निर्ब्याजी ऋण, घरघरमा विजुली, जनजनमा सेयर लगायतका कार्यक्रमहरु अघि सारेको थियो । चालु आर्थिक बर्षको बजेट अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले गरेका हुन ।
कोभिडको महामारीका बिच अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत १५ जेठमा आफ्नो कार्यकालको तेस्रो बजेट भाषण गरे । नेपालमा प्रजातन्त्र पुनस्थापनायताका ३० वर्षमा लगातार तीनवटा बजेट बनाउन पाउने महेश आचार्यपछिका दोस्रो भाग्यमानी अर्थमन्त्री बनेका छन्, उनी । उनले चालु आर्थिक बर्षका लागि खतिवडाले १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट ल्याएका थिए । वैदेशिक व्यापारको असन्तुलन घटाउन र देश भित्र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न उनले केही नीतिगत सुधारहरु गरेका छन् । नेपालको निर्यात व्यापार उकास्ने र आयात निरुत्साहन गर्ने नीतिमा स्पष्ट र दृढ देखिएका छन् । पहिलो वर्षबाटै उनले विदेशबाट भित्र्याइने बिलासी वस्तुहरुमा उच्च कर लगाउने र स्वदेशबाट बाहिर जाने वस्तुहरुलाई संरक्षण दिने रणनीति लिएका थिए ।
अर्थमन्त्रीको यो नीतिको असर नेपालको वैदेशिक व्यापार सन्तुलनमा देखिएको पनि छ । यो आर्थिक वर्षका हरेक महिनामा नेपालको निर्यात बढेको र आयात घटेको छ । थोरै भए पनि व्यापार घाटामा सुधार आएको छ । आगामी आर्थिक ७८/७९ को बजेट अध्यादेशबाट आउने भएको छ ।